Google ga - egbochi igwe nwere 2 GB nke Ram site na iji gam akporo 11 | Gam akporosis
Google ga - egbochi igwe nwere 2GB RAM iji gam akporo 11 zuru oke
Onyeka Onwenu | | Gam akporo nsụgharị
Google amalitela ịhapụ ya A gam akporo 11 beta na na nhazi nhazi ngwaọrụ ọ na-ekpughe nkọwa nke na-adịchaghị mkpa. Ngwaọrụ ọ bụla chọrọ ịgba ọsọ sistemụ gam akporo 11 aghaghi inwe ihe kariri 2 GB nke RAM, ya mere, ha na-agwa ya na ndị mmepe XDA; onye obula nwere 2GB ma obu obere gha agha iji ngwanrọ gam akporo gam.
Nye ihe a niile A na-agbakwunye na ngwaọrụ ndị nwere 512 MB agaghị eburu ọrụ ekwentị GoogleYa mere, enweghi nkwado site na ọnwa ole na ole sochirinụ. Mgbanwe a ga - abịa na ụdị OEM nke ụdị kachasị ọhụrụ, yabụ ndị nrụpụta ahụ chọrọ ịnweta GMS ga - etinyerịrị opekata mpe 1 GB nke RAM.
1 Gam akporo Go ga-anọgide na-adị
2 A ga-anwale gam akporo 11 ugbu a
Gam akporo Go ga-anọgide na-adị
La Gam akporo Go version ga-anọgide na-adị na ekwentị ndị nwere 1 ma ọ bụ 2 GB nke RAM, mana ihe niile na-egosi na ụlọ ọrụ ga-arụnye Gam akporo 10 Go Edition ma ọ bụ gam akporo 11 Go Edition nyochaa. Sọftụwia a bụ ụdị nke nsụgharị zuru ezu nke Onye Mmepụta Google wepụtara.
Ezubere gam akporo Go ka ọ bụrụ sistemụ arụmọrụ mepere emepe sitere na Google site na imirikiti ihe eji eme ihe na obere ihe oriri na obere oghere, ma na-arụ ọrụ ahụ. Mmepe na-ama na-arụ ọrụ na ọtụtụ beta testers debug gam akporo 11 chinchi.
Ndị na-emepụta ihe n'okwu a ga-arụ ọrụ iji wepụta ekwentị ndị na-adịghị oke obi umeala inye ahụmahụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ụdị nke iri na otu nke gam akporo. Ugbua n'ahịa enwere ekwentị nwere 4, 6, 8 na 12 GB nke RAM, ya mere, ọ bụghị nsogbu siri ike maka ndị nrụpụta na-enye ọkara ma ọ bụ elu dị elu.
A ga-anwale gam akporo 11 ugbu a
Google weputara mbipute beta inwe ike nwalee ma nwalee usoro nwere ọtụtụ njehie, mana ọ na - enye gị ohere ịhụ ihe ga - abịa na - esote ekwentị ndị kpebiri imelite na nkwado ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo nsụgharị » Google ga - egbochi igwe nwere 2GB RAM iji gam akporo 11 zuru oke
Realme na-agba ndị ọrụ nde 40 gburugburu ụwa
Mepụta nọmba mebere maka ngwa WhatsApp